Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
Dagaalkan culus waxa uu ka dhacay mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada Shisheeye ay ka sameysteen gudaha magaalada Muqdisho.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey dagaalkan ku qaadeen fariisinka ciidamada gaalada soo duushay ay ka sameysteen Xeradii hore Maslax ee duleedka xaafada Suuqa Xoolaha ee degmada Hilwaa.
Dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho maadaamo dagaalkan la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalkan ayaa noqonaya dagaalkii ugu xooganayaan oo mudooyinkii dambe ka dhaca magaalada Muqdisho,waxeyna ciidamada Kufaarta Afrikaanta markii dagaalka uu soo gaba gaboobay Madaafiic ku garaaceen hareeraha Xerada Maslax taasi oo muujineysa in ciidamada Shisheeye khasaara culus lagu gaarsiiyay dagaalka.
Dagaalkan waxa uu imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Shabaabul Mujaahidiin gudaha magaalada Muqdisho ay ku dileen Sarkaal iyo askari ka tirsan dowlada Ridada,iyagoona sidoo kale dhaawacay hal askari oo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka Farmaajo.
Masha allah allaah hakuuleeyo mujaahidiint
Aamiin wey guuleysanayaan insha Allah